कवि बिनोदीको महाकाव्यको गृह विमोचन – Saurahaonline.com
कवि बिनोदीको महाकाव्यको गृह विमोचन
चितवन, मंसिर ९ । छन्देली कवि गोविन्दराज बिनोदीको महाकाव्य कैकेयीको गृह विमोचन तथा अन्तरक्रिया शनिबार गरियो ।
चितवन साहित्य परिषद्को आयोजनामा परिषद्कै सभाहलमा गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी प्रेमविनोद नन्दन, चितवन साहित्य परिषद्का अध्यक्ष सुरेन्द्र अस्तफल, भुवनहरि सिग्देल, डा. केशव चालिसे र पुष्पराज पौडेलले संयुक्तरूपमा कृतिको विमोचन गर्नुभएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. केशव चालिसेले रामायणकी खलपात्र कैकेयी कृतिमा नायकको रूपमा उभिनु उनि प्रतिको न्याय भएको बताउनु भयो । अर्का बक्ता भुवनहरी सिग्देलले कैकेयीले आफ्नो सन्तानको लागी चालेको कदम सहि भएको दाबी गर्दै स्रस्टा बिनोदीले कृतिमा गरेको मिथकीय प्रयोग अत्यन्तै प्रशंसनिय भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा महेश संस्कृत विद्यापीठका विद्यार्थी ऋषिराम पौडेल र प्रज्ज्वल खनालले महाकाव्यका केही हरफहरु वाचन गरेका थिए । रमेश प्रभात, द्वारिका नेपाल र लक्ष्मी बरालले कृतिका बारेमा बोल्दै कैकेयी नारी मनोबिज्ञानको सफल कृति भएको बताउनु भयो ।
अठार सर्गमा विभक्त कैकेयी महाकाव्यका प्रत्येक सर्गको अन्तमा शालिनी छन्दका एक एक श्लोक र पुरै महाकाव्यभरी अनुष्टुप छन्दका १३२२ गरि १३४० श्लोक रहेका छन् । कृतिलाई शिखा बुक्स काठमाडौंले छापेको हो ।